I-Lovely 1 BR Apartment B7FF @ Greenwood meadows
Candolim, Goa, i-India
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Dean
Nethezeka nomndeni wonke kule ndawo enokuthula ongahlala kuyoI-apt yethu iqhele ngekhilomitha nje ukusuka e-Candolim Beach kanye nohambo lwamaminithi angu-5 ukuya e-Calangute Market kanye nolwandle oludumile lwe-Baga. Izindawo zokudlela ezaziwayo nemijondolo yasogwini iseduze okuhlanganisa ne-LPK Waterfront edumile, iHouse of Lloyds kanye neCalamari.
I-Candolim Beach iyingxenye yogu olude olugudle uLwandle lwase-Arabia oluqala e-Fort Aguada luphele e-Chapora Beach.
Iyifulethi eliphansi futhi inamaveranda ama-2, eyodwa ibheke ngqo echibini kanye nengadi enomhlaba, kanti enye ibheke emnyango. Inengadi enhle eyenziwe kahle kanye nedamu lokubhukuda elikhulu kunawo wonke kule ndawo.
2 ovulandi, omunye ubheke swimming pool
Hlukanisa i-Ac ekamelweni kanye naseHholo
32 intshi LCD Tv
1 umbhede wabantu ababili ababili ekamelweni
1 usofa cum umbhede ehholo
I-wardrobe yeminyango engu-3
Itafula lokudlela elinezihlalo ezi-4
vula isipele se-inverter yabalandeli, izibani ne-WIFI
Izitsha, izibuko kanye nezinto zokusikaLeli fulethi elibanzi, eliseduze nemvelo kanye nohlaza, lisendaweni ezolile futhi edlalwa okokuqala ngqa e-Candolim. Kude nesiphithiphithi futhi eduze nolwandle oludumile lwe-Candolim ne-Calangute.
Leli fulethi lingakwazi ukuhlalisa kahle izihambeli ezi-4.
Indawo - incazelo yendawo
Isici esiyingqayizivele saleli fulethi ukuthi liseduze nayo yonke imisebenzi yezohwebo, kodwa nokho likude ngokwanele ukuba wonke umuntu ohlala khona angaphazanyiswa.
Lesi situdiyo esiziphekelayo e-Candolim, e-Goa, e-India sisendaweni esanda kwakhiwa, emagqumeni phakathi nendawo eluhlaza ezungeze isiza. Ifulethi linikeza ukuthula nokuthula. Indawo inakekelwa kahle ngokwezindinganiso zaseYurophu, ihlanzekile futhi ihlanzekile, ivikelekile futhi inezinsiza zesimanje.
Bheka Ukuqinisekisa Kudingeka
Abanikazi banothando olujabulisayo, abanezinhliziyo ezifudumele, abashadikazi abasebasha abazinze e-Bombay. Senze i-GOA ikhaya lethu lesi-2!!...Thanda ukuhamba kalula, isiko elikhululekile kanye 'Ne-Shiny Happy People' yase-Goa.
Ilungele iholide lokuphumula noma i-biz.
I-Goa yaziwa nangokuthi "iRoma YaseMpumalanga", "IPharadesi Lezokuvakasha" kanye "NePearl of the Orient" futhi itholakala ogwini olusentshonalanga yeNdiya ebhandeni elisogwini elaziwa ngokuthi i-Konkan. Ubuhle obuhle obumangalisayo nobukhazikhazi bezakhiwo namathempeli, amasonto nezindlu ezindala kwenze iGoa yaba intandokazi kubahambi emhlabeni jikelele.
Kunguhambo lwemizuzu emi-5 ukuya ebhishi laseCandolim kanye nemijondolo edumile yezilwane zasolwandle. Kukhona namabha aphilayo kanye nezindawo zokudlela zomndeni eziseduze. Imisebenzi efana nemidlalo yasemanzini, ukugibela amabhayisikili, i-spa, imibukiso yamasiko, ukubuka indawo nokunye okuningi..
Kwamakhelwane kunezindawo zokudlela ezidumile zaseCandolim kanye nezindawo zokudlela. Futhi isitolo esikhulu esidumile saseGoa sikaNewton siseduze kakhulu.
I-LPK Waterfront's eyenzekayo (i-Oggle -The disc) kanye ne-House of Lloyds Restaurant eyaziwa kakhulu kuseduze.
UDean uhlala etholakala uma unemibuzo vele umthumelele umlayezo
Hlola ezinye izinketho ezise- Candolim namaphethelo